Zvakanakisa Kwakavhurika Source Zvishandiso zveVanyori | Linux Vakapindwa muropa
Kana iwe uri munyoriAngave zvinyorwa zvehunyanzvi, kana mupepeti wenyaya, kana vanyori vebhuku, nezvimwewo, iwe unenge uchinyatsoda kuziva zvimwe zveakanakisa sosi sosi maturusi aunogona kushandisa kufambisa iri basa pane yako yaunofarira GNU / Linux kugovera. Uye zvese pasina kushandisa zvakati wandei pazvivakwa zve software marezinesi.
Iwe uchaona kuti hazvidiwe kuvimba nezvirongwa zvakaita seMicrosoft Office (yeIzwi), kana QuarkXpress, Adobe InDesign, Illustrator, CorelDraw, kana iya yeScrivener. Iyo mahara uye emahara dzimwe nzira havana zvakawanda zvekugodora izvi zvekubhadhara ...
1 Iwo mapurogiramu akanakisa evanyori
1.5 Scenarist KIT
Iwo mapurogiramu akanakisa evanyori
bibisco chishandiso chakagadzirirwa kubatsira vanyori venyaya, kunyanya vanyori. Iyi showa inokukumbira nhevedzano yemibvunzo iyo ichakubatsira iwe kuwana imwe yakasimba pfungwa yezviitiko. Uye zvakare, iwe unogona kurodha zvinyorwa zvako kune iro gore kana iwe uchizozvizadzisa nearo mupepeti uye nekudaro usazvirase.
manyoro chimwe chishandiso chekugadzira zvinyorwa. Asi mune ino kesi yakanangana nekutsanangudza matanho echitsauko chimwe nechimwe, vatambi vanobatanidzwa, kurongeka patsva nyore, nezvimwe. Zvese zvaunoda kuti uve nenzira yekukubatsira iwe kuvaka yako nyaya. Iyo zvakare ine zvimwe zvinhu, senge yayo frequency analyzer kuziva kuti ndeapi mazwi kana zvirevo zvinodzokororwa zvakanyanya, kunyora mode pasina zvinokanganisa, nezvimwe.
Kana izvo zvauri kutsvaga zviri nyora mazwi nekukurumidza, unogona kushandisa ichi chinyorwa chekuwedzera chishandiso chinoshanda pasina Nayo iwe unozokwanisa kugadzira yako wega tsika kiyi mazwi ekuwedzera iwo mabobhu maanogona kushandiswa kazhinji. Izvi zvinokurumidzisa kunyora kwako.
GitBook ibasa rekunyora tekinoroji. Iyo inoshandisa git-yakavakirwa vhezheni yekudzora sisitimu yekuteedzera yakanyorwa zvinyorwa. Iyo zvakare inobvumidza vashandisi vazhinji kuti vashande pamwe chete pagwaro. Inogona kuve yakanaka mukugadzira emanyorero emanyorero, madhatashiti, nezvimwe.
Kana iwe uchida nyora zvinyorwa, ipapo KIT Scenarist mhinduro hombe, yakazara kwazvo uye nyanzvi. Iyo inopa akawanda mabasa senge kugadzira uye kugadzirisa mabasa, kuwana projekiti manhamba, kuronga zvese zvinhu, GUI kuti iite intuitive, nezvimwe.
Icho chirongwa chinokutendera kuti ushandise Mutauro weMarkdown kugadzira zvinyorwa. Iyi yekusavhiringidza-yemahara edhita inogona kutumira kunze kune mafomati senge HTML, DOC, ODT, PDF, ePub, nezvimwe. Iyo inewo madingindira akasiyana ekukubatsira kuti ugare wakasununguka uchinyora kana kugadzirisa.
Scribus inozivikanwa desktop kutsikisa iyo yaunogona kugadzira yako bhuku uye shanda pane zvinyorwa zvakaita semagazini. Iyo ine rutsigiro rwevector dhizaini maturusi, mafirita, mhedzisiro, kugona kupinza uye kutumira kunze, mumiriri mumarkup mitauro yakadai seLaTeX kana Lilypond, nezvimwe.
Markdown chishandiso chine simba nacho rongedza uye nyora mavara akajeka uye wozoichinjira kune chero rimwe gwaro fomati. Unogona kuishandisa pamwe chete nezvirongwa zvakaita seGhostwriter, kunyange paine vanyori vanowirirana ...
AsciiDoc chimwe chishandiso chekunyora magwaro. Iyo ine rutsigiro rwemashoko ezasi, matafura, zvinongedzo zvemuchinjikwa, akaiswa mukati YouTube mavhidhiyo, uye zvimwe zvakawanda. Nayo unogona kugadzira mabhuku, zvinyorwa, zvinyorwa, zvinyorwa, mharidzo, mawebhusaiti, nezvimwe. Inotsigira kutendeuka kuHTML, PDF, ePUB, uye mapeji emurume.
Zvekunyora zvisina kana chekubatsira uye iwe tsvaga typos, zvakanakisa kuve neLimiTool. Iyo yekuperetera yekutarisa iyo inogona kushanda seyakawedzera mubrowser, uye zvakare muLibreOffice, nezvimwe.
LaTeX inzira inozivikanwa yekugadzirira magwaro anoverengwa nevanhu, senge zvinyorwa zvesainzi, kunyangwe ichigona kushandiswa kune mamwe marudzi emabhuku nemagwaro. Iyo inoshandisa akateedzana mamaki ekumisikidza kumisikidza kunyora, ichikubvumidza iwe kudzora fomati, wedzera zvinyorwa, muchinjiko mareferenzi, nezvimwe. NaLyX unogona kushanda nayo ...
Pakupedzisira, iwe haugone kukanganwa iyo hofisi suite par kugona, sezvakaita LibreOffice. Kwete chete kuti iwe Unemunyori sesimba rine simba izwi processor kuMicrosoft Word muHofisi, iwe zvakare une zvimwe zvinonakidza maturusi seDraw.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Resources » Zvakanakisa kuvhura sosi maturusi evanyori
Izvo zvakanakisa pane zvese zvaive zvisipo, izvo zvisingatsanangurike: Wordgrinder.